Huawei Mate 30: Riwaayadaha ugu waaweyn ee taleefannada | Androidsis
Warkii ugu fiicnaa ee Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay toddobaadkan. Dhamaad heer sare ah oo ah nooca Shiinaha, oo nooga tagay isbeddelo badan, marka lagu daro soo saarista faallooyin badan. Maqnaanshaha barnaamijyada Google iyo adeegsiga nooca isha furan ee Android Kuwani waa isbeddelada helay dareenka ugu badan ee warbaahinta iyo adeegsadayaasha. Waxay hadheeyeen qaar badan oo ka mid ah astaamaha ugu caansan ee kala duwanaanta.
Sidaa darteed, hoosta waxaan kaaga tageynaa adiga warar xiiso badan ama shaqooyin cusub waxaan ka helnay kuwan cusub ee Huawei Mate 30. Waxaa jira qaar iyaga ka mid ah oo ku jira moodeelka Pro oo keliya, haddii ay sidaas tahay, waanu tusi doonnaa xaalad kasta.
1 Taabashada xakamaynta mugga
2 Huawei Mate 30 oo leh 5G
3 Xakamaynta tilmaanta ee Huawei Mate 30
4 Isdhexgalka laptop ka fiican
5 Hab madow
Taabashada xakamaynta mugga
Huawei Mate 30 Pro wuxuu leeyahay shaashad qalooca oo ka muuqata xagga naqshadeynta moodooyinka kale. Naqshadayntan awgeed, badhamada mugga ee qalabka ayaa laga saaray. Taabadalkeed, nooca Shiinaha ayaa soo bandhigaya xakamaynta mugga taabashada, taas oo noo ogolaaneysa kordhi ama yaree mugga adoo isticmaalaya dhinacyada shaashadda. Hab lagu xakameeyo iyada oo aan loo baahnayn badhanno.
Kaliya samee a laba jeer ku dhaji fartaada labada dhinac ee taleefanka, labadoodaba way ka suurtoobi doontaa, sidaa darteed xakamaynta mugga ayaa la soo bandhigi doonaa, ka dibna waxaan kordhin karnaa mugga codka taleefanka si caadi ah. Hab wanaagsan oo loogu kabto maqnaanshaha badhanadan.
Huawei Mate 30 oo leh 5G
Mid ka mid ah riwaayadihii waaweynaa, ee ku dhowaad ahaa sir furan kadib Kirin 990 bandhig bilowga bisha, waa inay la yimaadaan 5G kiiskan. Nooca Shiinaha ayaa sii wadaya inuu sharad ku galo 5G taleefannadiisa sare, waana wax aan ka arki karno labadan aalad. Labada noocba waxay leeyihiin noocyo leh 5G oo la heli karo, sida la xaqiijiyay Khamiistii.
Xaaladda Huawei Mate 30 Pro 5G waan ognahay taas wuxuu lahaan lahaa qiimo dhan 1.199 euroMarka laga bilaabo suuqa, wax aan wali si sax ah u garanayn goorta ay noqon doonto. Laakiin waxay ballanqaadaysaa inay tahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu dhammaystiran ee qaybtan ka mid ah suuqa taleefannada 5G. Qeybaha aan lahayn 5G sidoo kale waa la sii deyn doonaa.
Dhinac muhiim ah kiiskan, ayaa ah in taleefanku horeyba ula jaan qaadi karo 5G SA iyo NSA. Marka si ka duwan kuwa badan, waxaa loo isticmaali karaa markii shabakadaha 5G si buuxda loo geeyay. Moodooyin badan ayaa hadda kaliya taageera wajiga koowaad ee 5G, sidaa darteed hantidiisa lama isticmaali karin markii shabakadahaani ay shaqeynayaan 2020.
Xakamaynta tilmaanta ee Huawei Mate 30
Tilmaamuhu sidoo kale waxay ka muuqdaan noocyadan kala duwan ee taleefannada Shiinaha ah, kuwaas oo awood u yeelan doona inay wax badan ka helaan Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro, mahadsanid saddex dareemayaal hore oo qalabkani leeyahay, sidaan ku arki karnay dhacdadii soo bandhigidda. Kaamirada hore, dareeraha qotoda dheer ee 3D iyo dareeraha tilmaamaha ayaa la isticmaalaa.
Thanks to iskudhafkan, isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay ku xakameeyaan dhamaadka-dhamaadka tilmaamo, looma baahna in la taabto taleefanka. Dareemayaashaani waxay u oggolaanayaan inay aqoonsadaan wajiga iyo muujinta adeegsadaha. Waxay sidoo kale awoodi doonaan inay xakameeyaan oo tarjumaan tilmaamaha uu adeegsadaha ku sameeyo taleefanka hortiisa. Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in la furo taleefanka, loo gudbiyo sawirrada muuqaalka sawirada, laga guuro hal qayb oo ka mid ah menuga ama loo qaado shaashadda.
Tilmaamuhu waa shay in muddo ah raadinayey in la hirgeliyo on Android muddo dheer. Nooc kasta wuxuu siinayaa nidaamkiisa ama tarjumaadiisa, sida aan hadda ku arki karno Huawei Mate 30 Pro. Markaa waxay ballanqaadaysaa inay noqon doonto qalab xiiso u leh dareenkan, iyada oo koontarool dheeri ah loogu talagalay dadka isticmaala.
Hal hawl oo ka mid ah qaybtan ayaa ah taas shaashadda ayaa wareegi doonta iyadoo lagu saleynayo booska indhahaaga iyo madaxaaga. Markaa haddii aad caadi u fadhido, adigoo fiirinaya shaashadda mid ka mid ah Huawei Mate 30, way sii taagnaan doontaa. Laakiin haddii aad madaxaaga ku fadhiisato fadhiga sariirta ama sariirta, oo aad dhinaca ka tahay, way soo jeesan doontaa, si ay ula jaanqaado booska indhahaaga mar walba. Sidoo kale, haddii aad taleefanka u keento meel aad ugu dhow indhahaaga, waxay kugu wargelin doontaa xaaladdan.
Isdhexgalka laptop ka fiican
Mid kale oo ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee soo bandhigidani waxay ahayd suurtagalnimada la wadaag faylasha laptop-ka iyo taleefanka hab aad u fudud, iyadoo la adeegsanayo tilmaam jiidis fudud. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku xirto labada qalab qaab fudud, xitaa adigoon u baahnayn qadka internetka. Sidan oo kale, way fududaan doontaa in la gudbiyo feylasha mid iyo tan kale.
Shaashadda kumbuyuutarka waxaad awoodi doontaa inaad aragto shaashadda Huawei Mate 30 ama Mate 30 Pro. Waad nuqulan kartaa feylasha inta udhaxeysa labada aalad, waxaad kaga jawaabi kartaa fariimaha inta aad shaqeyneyso, laakiin hal aalad, hab kuu ogolaanaya inaad si hufan u shaqeyso. Hawl aad shaki la'aan aad u jeclaan doonto wax badan.
Markii la soo bandhigayay EMUI 10 bilowga bisha Ogos durba habkan mugdiga ah waxaa lagu xayeysiiyay barta internetka, taas oo aan horeyba ugu jirnay kuwan Huawei Mate 30. Labada taleefan ee cusub ee shirkadda Shiinaha waxay leeyihiin EMUI 10 oo ah lakab shakhsiyeed. Sidan oo kale, dhammaantood waxaa loo beddelaa midab, midabkiisa asalka ah, kaas oo ku noqda madow kiiskan.
Tani waa wax saameynaya interface-ka oo dhan, marka lagu daro codsiyada. Sidan oo kale waxay u oggolaaneysaa adeegsi raaxo leh oo ka dhib yar indhaha marka ay tahay inaad taleefanka isticmaasho. Marka lagu daro keydinta tamarta, tan iyo inta udhaxeysa, sida caadiga ah, waxay isticmaashaa alwaaxda OLED. Marka waxaa lagu ogaan doonaa isticmaalka tamarta.
Sida ku caan baxday sumcadda Shiinaha, dhexdeeda heer dhammaadkeedu sarreeyo, kaamirooyinka ayaa mar kale ku xiran horumar. In kasta oo xaaladdan ay doonayeen inay xoogga saaraan wax kasta oo ka sarreeya hagaajinta duubista fiidiyowga. Dhammaan horumaradaani waxay si aad ah uga muuqdaan Huawei Mate 30 Pro, oo leh afar kamaradood, halkaas oo duubista fiidiyowyada si aad u gaabis ah u taagan.
Maaddaama qalabkan ay suurtagal noqon doonto in la duubo illaa 7.680 fps, sidii horeyba looga faallooday kahor soo bandhigideeda rasmiga ah. Marka way ka sarreysaa qaabkan dhammaan tartamayaasha suuqa. Waxay u oggolaaneysaa qaabkan si loo helo fiidiyowyo si faahfaahsan u hadlaya wakhti kasta, oo ku habboon khibrad wanaagsan, taasna waa la barbar dhigi karaa kuwa ay bixiyaan qalab xirfad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Warkii ugu fiicnaa ee Huawei Mate 30
4 GB Google Pixel 64 waxaa lagu qiimeyn doonaa 820 euro